Tafakatra 450 Ar mantsy ny iray kapoaka amin’ny fotsim-bary amin’izao raha 250 Ar teo aloha. Ankoatra izay dia miakatra be ihany koa ny vidin-tsolika izay voalaza fa efa mahatratra 12.000 Ar ny iray litatra. Velon-taraina tanteraka ireo mponina any an-toerana. Mikasika ireo karazana kojakoja toy ny savony, siramamy .... dia hifampitadiavana izany, hoy ny vaovao ary raha misy aza dia vidiana lafo. Fantatra kosa fa tsy mbola niakatra aloha hatreto ny saran-dalana mihazo ity distrika iray ity.